Wepamusoro 5: Chinyorwa chekuchengetedzwa kwakachengeteka kweLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Kugoverwa, Free Software
Munguva pfupi yapfuura, pamwe nezvose zvinonyadzisa zvakaratidzwa naWikileikileaks, backdoor intrusions pane inozivikanwa yemahara software mapurojekiti (kunyangwe paLinux kernel) nekuraira kweNSA, hurumende espionage, cyber kuchengetedzeka, chirongwa chePRISM, kureurura kwaEdward Snowden, nezvimwe, kuchengeteka uye kuvanzika yakakosha kukosha.
Neichi chikonzero, muchinyorwa chino tichaita enzaniso yeimwe yeiyo Kugoverwa kweLinux inoremekedza kuvanzika kwako uye zvakavanzika zvakanyanya. Kudzidza uye kuenzanisa kwaitwa neTechRadar uye yakazivisa kuti migove yakanakisa mune izvi IprediaOS, Liberté, Privatix, Miswe uye Whonix.
IprediaOS: Linux-based operating system iyo inopa kusazivikanwa uye kuvharidzirwa kwese Internet traffic nekuda kweiyo I2P network. Kugoverwa uku kunogona kuwanikwa neGNOME uye LXDE graphical desktop nharaunda.
Sununguka Linux: iko kugovera kunoenderana naGentoo uye izvo zvinotarisana nekuchengetedza, kugona, kureruka uye nyore kushandisa. Unogona kuiwana muiyo LiveUSB vhezheni kuti umhanye iyo kubva pendrive kana kubva kune SD kadhi. Iyo inozivikanwa Tor ndiyo iyo ichagadzirisa manejimendi eInternet mune ino distro.
Zvakavanzika: imwe Live Live distro yakaunzwa kwatiri naMarkus Mandalka, ino nguva yakavakirwa paDebian. Kugoverwa uku kunotakurika kune inovimbika encryption system uye inobvumidza iwe kunyorera kutaurirana kwekusazivikanwa kubhurawuza.
Miswe: kumwe kugovera kunozivikanwa mukuvanzika uye kusazivikanwa. Iwe unogona kufamba zvakadzikama nazvo nekutenda kudziviriro yayo yakasimba uchishandisa Tor uye kumisikidza kwayo kuvharidzira isingazivikanwe kutaurirana. Iyo zvakare inobvumidza iko kunyorera kwemagwaro, maemail uye meseji yekutumira.
Whonix: Kuti uve "zvachose" asingazivikanwe, unogona kushandisa iyi Debian Linux-senge kugovera. Iyo inoshandisa iyo ine simba Tor chishandiso uye inodzivirira DNS kusefa, kuitira kuti kunyangwe malware ine midzi yerombo haigone kuburitsa IP yechokwadi yemushandisi. Zvese zvinoshandiswa zvinofanirwa kushandisa Tor ye network.
Kana vachida Imwe nzira, vanogona kutendeukira kune vanotevera Anonum.OS (yakabviswa paSurceforge saiti yekutambudzwa nemarware), kugoverwa kwemahara kwakagadzirirwa chinangwa ichi uye kwakavakirwa paOpenBSD. Mumwe wevatsivi ava Incognito LiveCD, Gentoo Linux-based distro yakagadzirirwa kusazivikanwa uye chengetedzo.
Mamwe mashoko - Linus Torvalds kuLinuxCon: Zvakakosha
Kunobva - Zvigadzirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Kuvanzika: zvakachengeteka zvakanyanya kugoverwa kweLinux
inoita 3 mwedzi
Pane vese vaunotaura ndeipi inonyatsoita kuti usazivikanwe?
Maitiro ekushandura Vhidhiyo kune yeMhuka GIF muLinux